Dr. Tint Swe's Writings: Stomatitis လျှာနာ ပါးစပ်နာအမျိုးမျိုး
၁။ ကျွန်မသားလေးက အခုငါးနှစ်ပါ။ သူ့လျှာက အဝိုင်းအကွက်တွေဖြစ်နေတာ။ ဖြစ်ကာစကတော့ လျှာကိုတအားကုတ်တာ။ ခုက မကုတ်တော့ဘူး။ အနာစဖြစ်တာ သုံးနှစ်ရှိပြီ။ အခုက USA မှာနေပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ ဆရာ့အိမ်ကို လာမေးချင်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၄ ကတော့ ဆေးခန်းကို လေးကြိမ်သွားတယ်ဆရာ။ ဆေးခန်းသွားရင် စကားပြန်နဲ့ပြောတာပါ။ ဆရာဝန်က သာမန်ပဲလို့ပြောတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မသားအနာက မပျောက်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးတခုလောက်မေးချင်လို့ပါရှင့်၊ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော်။ သမီးလျှာအရင်းပိုင်း ဘေးတဖက်စီမှာ အဖုတွေထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ တဖက်မှာ ၃ဖု၊ တဖက်မှာ ၂ဖု၊ အဲဒီအဖုတွေကမနာပါဘူးဆရာ။ အစာလည်းစားရပါတယ်။ လျှာထိပ်လေးတော့ လျှာကွဲသလိုမျိုးခံစားရပါတယ်၊ ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်တော့ သူပေးတဲ့ဆေးက မသက်သာပါဘူးဆရာ၊ ခုသွားခံတွင်းဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့ရက်ချိန်းယူထားပါတယဆရာ၊ သမီးစိုးရိမ်တာက လျှာကင်ဆာ ဖြစ်မှာစိုးတာပါဆရာ။ သမီးဆေးလိပ်လည်းမသောက်ကွမ်းလည်းမစားပါဘူး။ သမီးဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ အကြံဉာဏ်လေးပေးပေးပါနော်ဆရာ၊ သမီးကြောက်နေလို့ပါ။ သမီးလျှာပေါ်ကအဖုပုံပါကြည့်ပေးပါဆရာ။ တပုံက အစိမ်းရောင်ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဆရာ အဖုလေးပါဆရာ။ သမီးကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါနော်
ကျွန်မအသက်က ၃၂ပါဆရာ၊ ကျွန်မလျှာအရင်းမှာအသားဖုတွေထွက်လာတာပါ၊ဘယ်ဘက်မှာ ၃ဖု၊ ညာဘက်မှာ ၂ဖု၊ ဖြစ်နေတာကြာပီဆိုတော့ တနေ့ကလျှာတွေနာလို့ ပါးစပ်ကိုဟကြည့်ရင် လျှာအရင်းမှာတွေ့တာပါဆရာ၊ ဆေးခန်း တခေါက်သွားတော့ ဗီတာမင်စီပေးပါတယ်၊ မသက်သာပါဘူးဆရာ၊ နောက်တပတ်မှသွားနှင့်ခံတွင်းကိုသွားပြမှာပါ၊ အစားလည်းစားလို့ရပါတယ်ရေလည်းသောက်လို့ရပါတယ် ကြောက်တာက ကင်ဆာဖြစ်မှာကိုကြောက်တာပါဆရာ၊ ကင်ဆာလက္ခဏာပုံစံဟုတ်မဟုတ် ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ပြောပေးပါနော်ဆရာ
အသက်တမျိုးသာတိုးသိရတယ်။ ကျန်တောတွေ မပြောပါ။ မပြောလည်း ရတယ်။ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။
ပါးစပ်နာနဲ့ လျှာကွဲတာတွဲရေးပါရစေ။ Fissured or cracked tongue လျှာကွဲတာကို Geographic tongue ပထဝီ-မြေပုံနဲ့ တူတယ်လို့ နှိုင်းကြတယ်။ လျှာကွဲတာမွေးရာပါ ဖြစ်တတ်တယ်။ ငယ်ကတည်းကနေ စတယ်။ ကြီးလာလေ သိသာလေ။ Down syndrome ဆိုတဲ့ မွေးရာပါ ဦးနှောက် အားနည်းရောဂါရှိသူ ၁ဝ ယောက်မှာ ၈ ယောက်က ဒီလို လာဖြစ်တယ်။ မသေချာရင် အပူအစပ်စားတာ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်စတာတွေကိုလွှဲချရတယ်။ ပါးစပ်အနံ့ပျယ်ဆေး အပြင်းသုံးတာ၊ သွားတိုက်ဆေးအပြင်းသုံးတာ၊ ဗီတာမင်ဘီကို စုပ်မယူနိုင်တာ၊ အူမကြီးမကောင်းတာတွေကိုလဲ ထည့်စဉ်းစားရတယ်။
စိတ်ဖိအားများနေချိန်တွေမှာ အိပ်နေရင်း လျှာကိုက်မိတတ်တယ်။ စားတဲ့ အစာနဲ့ မတည့်တာ၊ အစာအိမ်-အက်စစ်ဓါတ်က အထက်တက်လာတာ၊ တချို့မှာ ဆီးချိုနဲ့ တွဲနေတတ်တယ်။ မှိုရောဂါကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဗီတာမင်နဲ့ ဓါတ်ဆားနည်းတာတွေပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာ သိဘို့ခက်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲ အခက်အခဲတွေ ဝင်လာနိုင်တယ်။ အစားအစာတွေ ညပ်နေတတ်တယ်။
Cold sores အအေးနာခေါ် မြန်မာပြည်မှာ အပူကန်တာဆိုတာ ရေယုံဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစာ (၁) ကနေဖြစ်တယ်။ ပါးစပ် အစွန်မှာဖြစ်တယ်။ ကူးစက်နိုင်တယ်။ အဖြစ်များတယ်။ ပျောက်လွယ်ပါတယ်။ အဲလို အလိုလိုပျောက်တာဆိုရင် အရပ်ဆေးနည်းတွေ တယောက်တမျိုးလာပေးတတ်ကြတယ်။
Aphthous ulcer (Canker sore) အနာဘေးနှုတ်ခမ်းနီရဲပြီး အတော်နာတယ်။ ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါ။ နှုတ်ခမ်းနေရာမှာ အရည်အောင်းနေတဲ့အနာမျိုးကိုသာခေါ်ရတယ်။ အနာပုံစံက တခါတွေ့ဘူး၊ မှတ်ထားဘူးရင် မလွဲနိုင်ဘူး။ ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းနေမယ်။ တလက္မရဲ့ ၁ဝ ပုံ ၁ ပုံကနေ ၅ ပုံလောက်အထိ ကြီးတယ်။ အလည်ပိုင်းက ခပ်ဝါဖြူဖြူနဲ့ ခွက်နေပြီး၊ ဘေးနှုတ်ခမ်းက နီရဲနေမယ်။ ဖြစ်ရင် အတော်နာတယ်။ ပူစပ်နေမယ်။ ရေသောက်တာတောင်မှ မခံချင်ဘူး။ ထမင်းစားရင် သိပ်ဒုက္ခရောက်တယ်။
ထုံဆေးလိမ်းဆေးကို သုတ်လိမ်းလိုက်ရင် ခဏလောက်မနာတော့ဘဲ ထမင်းစားနိုင်လိမ့်မယ်။ ထုံဆေးပျယ်ရင် ပြန်နာမယ်။ Lidocaine, Xylocaine, Xylocaine Viscous (Lidocaine viscous) ဆေးနာမည်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အပျော့အပြင်းမတူဘူး။ မပျောက်နိုင်သူတွေကို Corticosteroids ပါတဲ့လိမ်းဆေး ပေးနိုင်တယ်။ ဆေးနာမည်တွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အပျော့အပြင်းမတူဘူး။ Paracetamol တို့ Ibuprofen တို့လို အနာသက်သာဆေး အစာနဲ့ တနေ့ ၂-၃-၄ ကြိမ်သောက်နိုင်တယ်။ ခရမ်းရောင်ဆေးလိမ်းရင် ပိုးဝင်တာ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ အခု မသုံးခိုင်းတော့ဘူး။ ရေများများသောက်ပါ။ ဆားရည်နဲ့ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပါးစပ်ဆေးပါ။ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စုနဲ့ ဗီတာမင်စီ ၅ဝဝ အား သောက်ပါ။
White tongue လျှာမှာဖြူနေပြီး ထူနေတာကို Coated tongue လည်းခေါ်တယ်။ အဲတာတွေက ဗက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ ဖန်းဂတ်စ်ခေါ် မှိုပိုတွေစုဝေးနေတာဖြစ်တယ်။ ဆဲလ်အသေတွေနဲ့ရောနေတယ်။ ရောဂါကြီးတခုခုကြောင့်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။ လျှာက်ု သွားတိုက်တံနဲ့ အသာအယာတိုက်ပေးတာနဲ့ပျောက်မယ်။ တော်တော်နဲ့မပျောက်ရင်တော့ ဆေးလိုမယ်။
Leukoplakia လို့ခေါ်တာက ကြာနေတယ်။ မနာဘူး။ သွားတိုက်တံနဲ့ ရှင်းလို့မရဘူး။ ဆဲလ်တွေသာမက လျှာကနေ Keratin ပါထုတ်ပေးလို့ဖြစ်တာ။ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သောက်သူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ လူကြီးတွေမှာဖြစ်ရင် ကင်ဆာ ပြောင်းမှာကို သတိထားနေရမယ်။
Oral lichen planus ဆိုတာက ခံတွင်း လျှာအပါအဝင်မှာဖြစ်တယ်။ ခုခံအားမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ သာမန်ဆိုမနာပါ။ ဆိုရင်နာမယ်။ အနေရခက်မယ်။ ပူလောင်မယ်။ သွားဖုံးအနာဖြစ်မယ်။ ဘာလို့ဖြစ်လည်း တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါ။ မိသားစုလိုက်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ Antiseptic mouthwash ပိုးသေဆေးပါ ပါးစပ်ဆေးရည်သုံးရမယ်။ Steroid sprays or steroid tablets ဆေးပြားကိုရေစိမ်ပြီး ခံတွင်းသန့်ရှင်းပေးရမယ်။
ခံတွင်းဖန်းဂတ်စ်ခေါ် မှိုပိုးက အလိုလိုမပျောက်ရင် မှိုဆေးလိုမယ်။ ပဌမတန်းစားဆေးတွေကတော့ Clotrimazole troches 10 mg တနေ့ ၅ ကြိမ်။ (သို့) Nystatin suspension တနေ့ ၄ ကြိမ်။ (သို့) Fluconazole 100 to 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ ဒုတိယတန်းစားဆေးတွေကတော့ itraconazole solution 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်။ (သို့) posaconazole 400 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ (သို့) Voriconazole 200 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်။ (သို့) Amphotericin B (AmB) suspension 100 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်။ Clotrimazole or nystatin လိမ်းဆေးတခုခုကို သာမန်ဖြစ်တာအတွက်လိမ်းနိုင်တယ်။ (အက်ဖ်သပ်စ် အာလ်ဆာ)၊ Herpatic Stomatitis လျှာနာခြင်း၊ Fluocinonide ointment 0.05% (သို့) Triamcinolone acetate 0.1% ointment (သို့) Diclofenic 3% လိမ်းပါ၊ Acyclovir 200-800 mg တနေ့ ၅ ကြိမ်၊ ၇-၁၄ ရက်သောက်ပါ။ Ulcerative Gingivitis သွားဖုံးရောင်ခြင်းအတွက် Penicillin 250 mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်သောက်ပါ။
2. Aphthous ulcer and Fissured tongue လျှာနာ အာနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/aphthous-ulcer-and-fissured-tongue.html
3. Bad breath ခံတွင်းနံ့ မကောင်းရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bad-breath.html
4. Black Spots on Tongue လျှာအမဲစက် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/black-spots-on-tongue.html
5. Common Oral Mucosal Lesions ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/common-oral-mucosal-lesions.html
6. Gingivitis သွားဖုံးရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/07/gingivitis.html
7. Herpes labialis နှုတ်ခမ်းရေယုံ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/herpes-simplex.html
8. Oral cancer ခံတွင်းကင်ဆာလက္ခဏာများ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/oral-cancer.html
9. Oral hygiene ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/oral-hygiene.html
10. Sore throat လည်ချောင်းနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/sore-throat.html
11. Stomatitis လျှာနာ ပါးစပ်နာအမျိုးမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/stomatitis.html
12. Teeth Grinding သွားကြိတ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/teeth-grinding.html
13. Teeth သွားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/teeth.html
14. Teeth သွားပေါက်ချိန် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/teeth.html
15. Thrush (Oral candidiasis) မှက္ခရုနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/thrush-oral-candidiasis.html
16. Tongue diseases လျှာရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tongue-diseases.html
17. Toothache သွားကိုက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/toothache.html
ဒီစာအောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်နည်းတွေ ရေးလာကြမယ်လို့ ကြိုသိထားတယ်။ ရေးလာရင် ဖျက်ပါမယ်။ ကိုယ့်နေရာမှာသာ ရေးပါခင်ဗျား။